တချို့အစားအစာတွေက ဗိုက်ထဲမှာအစာမကြေဘဲ ပြန်စွန့်ထုတ်လိုက်တာ စိုးရိမ်ရလား? | Duwun
အမျှင်ဓာတ်များပြားတဲ့အစားအစာတွေ၊ ပြောင်းဖူး၊ ဟင်းရွက်စိမ်းအချို့၊ အခွံမာသီးနဲ့ အစေ့အဆံတွေဟာ စားသောက်ပြီး အစာအိမ်ထဲကို ရောက်သွားပေမဲ့ အစာအိမ်က ကျေညက်အောင် မချေဖျက်နိုင်ပါဘူး။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုသာ အစာချေပေးနိုင်တာကြောင့် မစင်ထဲမှာ ပုံစံမပျက် ပြန်ထွက်သွားတာ တွေ့ဖူးပါလိမ့်မယ်။ ဒါက စိုးရိမ်ဖို့လိုသလား?
အစာခြေအင်ဇိုင်းတွေဟာ ဖော်ပြပါအစားအစာတွေကို ကျေညက်သွားအောင် မချေနိုင်တဲ့အခါ သတိထားပြီး စားဖို့လိုပါတယ်။ ဖြည်းဖြည်းချင်းဝါးပါ။ တစ်လုတ်စားပြီးတိုင်းမှာ သေသေချာချာ ညက်အောင်ဝါးပါ။ ရေကိုလည်း များများသောက်ပေးရပါမယ်။ အစားစားပြီးရင် ဒိန်ချဉ်လေးသောက်ပေးတဲ့အခါ အစာချေစနစ်ကို ပိုကောင်းသွားစေပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် မကျေတာတွေလည်း ကျေသွားနိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကောင်းသူတစ်ဦးရဲ့ မစင်ဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပုံစံချင်းကွဲပြားပါတယ်။ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ဝမ်းပျော့ခြင်းတွေဟာ ကျန်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ လက္ခဏာတွေမဟုတ်ဘူး။
ကိုယ်စားလိုက်တဲ့အရာတွေက မကျေညက်ဘဲ ဒီအတိုင်း ပုံစံမပျက် မစင်ထဲပြန်ပါလာတာက ရံဖန်ရံခါ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိပါတယ်။ စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောဖြစ်ပြီး အစာတွေ ဒီအတိုင်းပြန်ထွက်လာတာဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်ဆီသွားပြဖို့ လိုပါတယ်။ အစာခြေစနစ်ကို ဒုက္ခပေးတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ရောက်နေမှာစိုးလို့ပါ။ လေပွမယ်၊ ဗိုက်အောင့်မယ် စတာတွေ ခံစားလာရတာမျိုးရှိရင်လည်း မပေါ့ဆသင့်ပါဘူး။